Mila mandini-tena hahalalana ny hafa | NewsMada
Mila mandini-tena hahalalana ny hafa
Anisan’ny vitsy mpanao sady sarotra amin’ny maha olombelona ny fandinihan-tena. Raha mba misy manao izay fandinihana-tena lalina sy maharitra izay aza, saika mibahan-toerana sy mandeha ho azy ny fiheveran-tena ho zavatra, tsy misy toa azy…
Tsy afa-miala amin’izany izao fitondrana izao? Mampikaikaika ny maro amin’izay lazainy sy ataony, mampahory… Efa samy nampiaka-peo tamin’ny teny tsy misorona amin’ny tsy fahombiazana ny firaisamonina sivily, fiangonana, mpanao politika…
Inona no eo? Tsy mahadini-tena ny mpitondra, manohy hatrany ny ataony. Lehibe tsy meloka? Eo ny tsy fanarahan-dalàna, ny fanapahan-kevitra tsy ierana amin’ny famelana ny vahiny handroba tany, ny tsikombakomba amin’ny olona akaiky…
Mifanohitra amin’izay lazainy hoe ataony aza ny zava-misy sy izay tena iainan’ny vahoaka ifotony. Mihazakazaka be, hono, ny fandrosoana, be ny asa vita… Izany tokoa ve? Izay ilay hoe tsy mahadini-tena, mihevi-tena ho zavatra sy mandoka tena.
Mbola ho azo amin’ny fitaka sy fampandriana adrisa toy izany ve ny vahoaka? Ny fiombonambe iraisam-pirenena, ny fitrosam-bola mahazatra… Efa mby amin’ny tsy azo zakaina sy tsy azo leferina intsony ny raharaha izao.
Inona ny vahaolana? Eo ny hoe fiaraha-mitantana hirosoana amin’ny hoe fanovana lalàmpanorenana sy lalàm-pifidianana. Na ny fihaonambem-pirenena, fampihavanam-pirenena, fanorenana ifotony… Mifampitarika sy mifameno avokoa izany.
Amin’ny fomba ahoana? Eo indrindra izao… Tsy vonona izay hifampidinika amin’ny hafa ny fitondrana, hanao izay fomba rehetra hijanonana eo. Izay no mampirongatra ny fampiasana herim-pamoretana, lainga, vola amin’ny alalan’ny kolikoly…?
Na ahoana na ahoana, misy fatrany sy fetrany ny zava-drehetra. Izay kosa no mahatonga ny karazana hetsika sy fitokonana etsy sy eroa? Mihamasaka, mihamitambatra… Hanao ahoana ny ho vokatry ny tsy fandinihan-tena sy ny tsy firaharahana ny hafa?
Mila mandini-tena mba hahalalana ny hafa, na mahalala ny hafa mba handinihan-tena. Fahafirin’iza teto amin’ny tantaram-pirenena moa?